Nepal Deep | एमसीसी संसदमा आउन खोज्नु रहस्यमय छ, मैले रोक्ने प्रयास गरेकै हो: पूर्वसभामुख महरा
काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहस्यमय भएको बताएका छन्। महराले एमसीसी पैसा मात्र भएको भए अर्थमन्त्रालयले मात्र हेरे पुग्नेमा संसदबाटै पास गर्न खोज्नुको पछाडी रहस्य लुकेको बताएका हुन्।
नेपालखबर अनलाइनसँगको कुराकानीमा महराले भने, ‘पहिलो, एमसीसीमा हाम्रो पार्टीको रणनीति जोडिएको छ। यसलाई म व्याख्या गर्दिनँ। दोस्रो, एमसीसी सामान्य चिज होइन। यसलाई हलुका ठान्नु हुँदैन। तेस्रो, म तपाईंलाई के मात्र भन्न चाहन्छु भने एमसीसीमा जुन ५५ अर्ब आउने कुरा छ, त्यो पैसा मात्र होइन। पैसा मात्र भए त अर्थ मन्त्रालयले गरे भइहाल्छ नि। म पनि अर्थमन्त्री भएर चलाएको हुँ, मलाई पनि अर्थको कुरा थाहा छ। ५५ अर्बको दोब्बर त्यहीँ ल्याएर गरे पनि हुन्छ नि। यहाँ संसदमा आउनु पर्दैन। एमसीसी किन संसदमा आउन खोज्या? यो विषय बुझ्न जरुरी छ। म यसको पनि व्याख्या गर्दिनँ। अहिले म यति मात्र भन्छु– नेपाली कांग्रेसमा सबै एमसीसीका पक्षमा छन्? मलाई लाग्दैन। अहिले जनता यसको विरुद्धमा छन्।’
महराले आफूले सकेसम्म सभामुख हुँदा एमसीसी रोक्ने प्रयत्न गरेको पनि बताए। उनले भने, ‘पहिला त सभामुख हुँदा मैले रोकेँ र त्यो मेरो विषय जस्तो मात्र भयो। अहिले त आम जनताको विषय भइसकेको छ। मैले समर्थन गरे पनि जनताले मान्दैनन्।’
महराले अमेरिकाले भनेजस्तो नेपाललाई भूराजनीतिक हिसाबले एमसीसी पास गर्न सहज नभएको बताएका छन्। उनले भने, ‘नेपालको स्थिति एमसीसीका पक्षधरले भनेको जस्तो सजिलो छैन र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि त्यति सजिलो छैन। एमसीसीको अन्तर्य के हो? यसको भित्री कुरा के हो? राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले बुझिसकेको स्थिति छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो पार्टीले कमसेकम अहिलेको अवस्थालाई संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन गाह्रो छ। यसको संशोधन वा परिमार्जन नगरी अगाडि बढाउन समस्या छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति नै सही छ।’
महराले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब भएको महसुस गरेको पनि बताए। उनले भने, ‘हामीले यो कुरा कूटनीतिक तहमा पनि भनिसक्यौं, नेपाली कांग्रेसलाई पनि भनिसक्यौँ। नेपाली कांग्रेसलाई पनि अप्ठेरो छ। म कांग्रेसका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु– जनमतको कदर गर्ने कि एमसीसी हेर्ने?’
महराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पढ्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘मलाई फेरि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले चाहिँ एमसीसी पढ्नु भएनजस्तो लाग्छ। म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फेरि एकपटक गहिरिएर पढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। पूर्वसभामुखको हैसियतले म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु–गहिरिएर पढ्नुहोस्। पढ्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि हेर्नुहोस्। तब छर्लङ्ग बुझिन्छ। अरु सबै कुरा त भन्नु परेन।’
काठमाडौँको कोर एरियाको मतगणना सुरु, सुध्रिएला स्थापित र सिंहको स्थिति?